Ny Tobilehibe Farihimena – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
« Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. » (Apo 3:20)
TOBILEHIBE FARIHIMENA :
Misy harena ara-panahy goavambe mila fantatsika taranaka aty aoriana ao amin’io Toby io indrindra ny resaka Fibebahana. Ireto no zavatra tonga ao an-tsaina mahakasika an’io Toby io.
(1) Izy no amin’ireo Tobilehibe efatra no Pastora no nantsoina hitarika azy. Izany dia manitsy ireo fahadisoam-pijery izay milaza fa tsy mifanaraka amin’ny Teolojia Loterana ny Fifohazana.
Pastora nianatra Teolojia Loterana i Rakotozandry Daniel nantsoina tao Farihimena. Tsy mba nanary ny maha-teolojiana azy izy ary hita taratra amin’ireo fomba fiasany sy ny fampianarana navelany fa tsy nanao tsinontsinona ny Teolojia izy.
(2) Isan’ny ahafantarana azy ny FIBEBAHANA. Nahery vaika tahaka ny afo mirehitra tsy maty vonoina ny asan’ny Fanahin’ny fampibebahana tao Farihimena, olona migogogo mitomany no heno rehefa mitory teny i Pastora Rakotozandry, tsy ny ranomaso akory no inona fa ireo fo torotoro mahatsiaro ny fahotany ka triatriarin’ny Tenin’Andriamanitra ka mibebaka amin-dranomaso. Maro ireo olona avy mihaino azy mitory teny no tonga dia babo tanteraka ka manolotra ny fiainany ho an’i Jesosy.
(3) Izany Fanomezampahasoavana tao aminy izany dia nahatonga ny olona nametraka azy ho amin’ny toerana avo loatra ka lasa mitovitovy amin’Andriamanitra no fiheveran’ny olona azy ka hoy i Jesosy taminy: « Takona Aho ka alaiko ianao » (paraphrase). Raha tsy misy fahadisoana dia niasa herintaona izy dia nalain’i Jesosy mba hiseho tsara fa i Jesosy no Andriamanitra fa tsy i Pastora Rakotozandry.
(4) Farany tadidy eto ilay tantara iray nanehoan’Andriamanitra fanasitranana mahagaga tao Farihimena (?)
Anjely no nidina tao amin’ny efitrano nanao fandidiana an’ity marary iray, sitrana izy taorian’io ary nitantara izany zava-mahagaga izany.
Mitaona anao aho mba hamaky ny tantaran’ny fifohazana tsy ny tany Farihimena ihany fa izy rehetra fa misy harena betsaka tsy fantatsika ao. Tsy i Pastora Rakotozandry akory no inona fa Andriamanitra niasa mahery teto amin’ny firenentsika tamin’ny alalan’ireo mpanompony ireo.
Ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny Voninahitra, Izy no Andriamanitra fa isika dia olombelona mpanompo nantsoiny fotsiny ihany.
Nosoratan’i Pastora Olivier Randrianjaka
Raha milaza ny amin’ny olombelona indray i Lotera dia soritany mazava tsara fa ny olombelona dia noharina araka ny endrik’Andriamanitra. Koa talohan’ny ...Hanohy hamaky
Tari-dalana Toriteny Alahady 02 oktobra 2016 (Alahady faha-19 manaraka ny Alahadin'ny Trinité)
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Indro ary atolotra anareo indray ny tari-dalana momba ny texte izay ho toriana amintsika ...Hanohy hamaky